အကြပ်အတည်း အမျိုးမျိုးကို ( ၇ ) ရက် အတွင်း လွတ်မြောက်စေ နိုင်တဲ့ အဓိဌာန် – Media Sharing
admin | May 29, 2020 | ဘာသာရေး | No Comments
တနင်္ဂနွေနေ့.. တနင်္ဂနွေ ထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၆ ခေါက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ဖွားမြတ်စွာဘုရားရှင် အပေါင်းကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့ပါ ။ မိမိ ကုသိုလ် အလုပ်အားလုံး ပြီးစီးသည့် အခါတနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်နတ်မင်းကြီးကို အမှုးထားပြီး ဝေနေယျ တို့ကိုမေတ္တာပို့ အမျှေဝေပါ ။
စသည်ဖြင့် အထက်ပါ အတိုင်း အတိုချုံးခွင့် ပြုပါ ခင်ဗျာ …. အင်္ဂါနေ့ ရာဟုထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၁၂ ခေါက် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကြာသာပတေးထောင့်၊ မေတ္တာသုတ်တော် ၁၉ ခေါက်၊
ကြာသပတေးနေ့..စနေထောင့်.၊ မေတ္တာသုတ်တော်၁၀ ခေါက် ၊
သောကြာနေ့…ဗုဒ္ဓဟူးထောင့် ၊ မေတ္တာသုတ်တော်..၁၇ ခေါက် ၊
စ နေနေ့ အင်္ဂါထောင့် ၊ မေတ္တာသုတ်တော် ၈ခေါက် ၊
တနင်္ဂနွေနေ့ တနင်္လာထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၁၅ ခေါက် ။ မေတ္တာသုတ်တော် အဓိဌာန် ပြီးပါပြီ … ။
တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တနင်္ဂနွေထောင့်ကနေ စပြီး အဓိဌာန် ဝင်လာခဲ့ တာပါ ။
တနင်္ဂနွေနေ့ မှာပဲတနင်္လာထောင့်မှာ အဓိဌာန် ပထမအဆင့် ပြီးသွားတာပါ ။
လုပ်နိုင်ရင် ဆက်တိုက် ထိုနေ့မှာပဲ မောရသုတ်တော်ကို အထက်ပါ အတိုင်းပဲ တနင်္ဂနွေထောင့်ကနေ စပြီး အဓိဌာန် ဆက်ဝင် သွားပါမယ် ။
ဟိုတစ်ခါကျွန်တော် တင်ပေးဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် ရရှိစေသည့် အဓိဌာန်မျိုး ကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ ။
အဲဒီ့ အဓိဌာန်ကတော့ အလုပ်မရှိလုိ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ပို ကောင်းချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝင်နိုင်လေကောင်း လေပါပဲ ။
ဒီ အဓိဌာန်ကတော့ တစ်ကယ် အကျပ်အတည်း ဆိုက်ပြီး ပြဿနာပေါင်းစုံ တက်နေသည့် အခြေအနေမျိုး ရောက်နေသည့် သူတွေ အတွက် သီးသန့်ဖြစ် ပါတယ် ။
ပိုမို ထက်မြက်ချင်သူများ သန့်ရှင်းရေး ကုသိုလ်လေးနဲ့ တွဲပြီးလုပ်ပါ ။
လက်တွေ့လည်း လူအများကို ကျွန်တော် ညွှန်ပေးနေသည့် အဓိဌာန်ဝင်နည်း လေးသာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒုက္ခ သုက် ခသိပ်ရောက်လာရင် ဘုရားမှတစ်ပါး ကိုးကွယ်ရာမရှိ ၊ တရားမှ တစ်ပါး ကိုးကွယ်ရာ မရှိ၊ သံဃာမှ တစ်ပါး ကိုးကွယ်ရာ မရှိပါခင်ဗျား ။
ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရနိုင်သလို တစ်ကယ်ဖြစ်ချင် တစ်ကယ်လုပ်နိုင်ဖို့သာ လိုအပ်ပါကြောင်း အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတို့မှ လွတ်မြောက်ကြ ပါစေ သတည်း ။
စသညျဖွငျ့ အထကျပါ အတိုငျး အတိုခြုံးခှငျ့ ပွုပါ ခငျဗြာ …. အင်ျဂါနေ့ ရာဟုထောငျ့ မတ်ေတာသုတျတျော ၁၂ ခေါကျ ၊ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ကွာသာပတေးထောငျ့၊ မတ်ေတာသုတျတျော ၁၉ ခေါကျ၊
ကွာသပတေးနေ့..စနထေောငျ့.၊ မတ်ေတာသုတျတျော၁၀ ခေါကျ ၊
သောကွာနေ့…ဗုဒ်ဓဟူးထောငျ့ ၊ မတ်ေတာသုတျတျော..၁၇ ခေါကျ ၊
စ နနေေ့ အင်ျဂါထောငျ့ ၊ မတ်ေတာသုတျတျော ၈ခေါကျ ၊
တနင်ျဂနှနေေ့ တနင်ျလာထောငျ့ မတ်ေတာသုတျတျော ၁၅ ခေါကျ ။ မတ်ေတာသုတျတျော အဓိဌာနျ ပွီးပါပွီ … ။
တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ တနင်ျဂနှထေောငျ့ကနေ စပွီး အဓိဌာနျ ဝငျလာခဲ့ တာပါ ။
တနင်ျဂနှနေေ့ မှာပဲတနင်ျလာထောငျ့မှာ အဓိဌာနျ ပထမအဆငျ့ ပွီးသှားတာပါ ။
လုပျနိုငျရငျ ဆကျတိုကျ ထိုနမှေ့ာပဲ မောရသုတျတျောကို အထကျပါ အတိုငျးပဲ တနင်ျဂနှထေောငျ့ကနေ စပွီး အဓိဌာနျ ဆကျဝငျ သှားပါမယျ ။
ဟိုတဈခါကြှနျတျော တငျပေးဖူးသညျ့ အလုပျအကိုငျ ရရှိစသေညျ့ အဓိဌာနျမြိုး ကဲ့သို့ မဟုတျပါ ။
အဲဒီ့ အဓိဌာနျကတော့ အလုပျမရှိလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ အလုပျပို ကောငျးခငျြလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ဝငျနိုငျလကေောငျး လပေါပဲ ။
ဒီ အဓိဌာနျကတော့ တဈကယျ အကပျြအတညျး ဆိုကျပွီး ပွဿနာပေါငျးစုံ တကျနသေညျ့ အခွအေနမြေိုး ရောကျနသေညျ့ သူတှေ အတှကျ သီးသနျ့ဖွဈ ပါတယျ ။
ပိုမို ထကျမွကျခငျြသူမြား သနျ့ရှငျးရေး ကုသိုလျလေးနဲ့ တှဲပွီးလုပျပါ ။
လကျတှလေ့ညျး လူအမြားကို ကြှနျတျော ညှနျပေးနသေညျ့ အဓိဌာနျဝငျနညျး လေးသာ ဖွဈပါတယျ ။
ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး ဒုက်ခ သုကျ ခသိပျရောကျလာရငျ ဘုရားမှတဈပါး ကိုးကှယျရာမရှိ ၊ တရားမှ တဈပါး ကိုးကှယျရာ မရှိ၊ သံဃာမှ တဈပါး ကိုးကှယျရာ မရှိပါခငျဗြား ။
ကိုယျလုပျမှ ကိုယျရနိုငျသလို တဈကယျဖွဈခငျြ တဈကယျလုပျနိုငျဖို့သာ လိုအပျပါကွောငျး အခကျအခဲ အကပျြအတညျးတို့မှ လှတျမွောကျကွ ပါစေ သတညျး ။